एक नर्स भएकै कारण नयाँ बिहानीसंगै आशा होइन निराशा पलाउँछ…. – BANKE POST
स्रोत साधन नदिने अनि सुइरक्षित रहनुहोस् भनेर मात्रै सुरक्षित भइन्छ र ?
खतरा दिनानुदिन बढ्दैछ स्वास्थ्यकर्मीमा
आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको कमिमा
एक नर्सले धेरै कुरामा धैर्यता राख्छिन्, बल्ल – बल्ल ६ महिना, १ वर्ष स्वयंसेवी भएर पाएको अस्पतालको काम पनि यो कोरोना नामक भाइरसले खाइदिन्छ जुन भाइरस पहिलो पटक २०१९ को गत डिसेम्बरमा देखिएको थियो जुन अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको छ । यहि कोरोनाका कारण तेस्रो विश्वयुद्धमा जसरी लाखौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरु दिनदिनै थपिरहेको छ । विश्वमा पहिलोपटक जनवरी २१ म स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना देखियो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य जनशक्तिको पहिलोपटक बैशाख ३० गते कपिलवस्तु तौलिहवा अस्पतालमा कार्यरत २५ वर्षकी नर्सलाई संक्रमण देखियो । त्यसैको भोलिपल्ट फेरी अर्का एक नर्स साथी संक्रमित भइन् । एकपछि अर्काे गर्दै आज पनि एकजना नर्स लाई संक्रमण भयो । यो संगै हालसम्म संक्रमित नर्सको संख्या ६ पुगेको छ । आउदा दिनमा यो संख्या बढ्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी उच्च जोखिममा छन् ।
एक ३ वर्षे नाबालकले हस्पिटलबाट आउँदा चकलेट ल्यादिनु है ममी भन्दै घरको झ्यालबाट चिच्याँउदा मन चसक्क हुन्छ अनि सम्झन्छु के थाहा फर्कदा चकलेटसंगै भाइरस पो ल्याउछु की ?
कोरोनाको कहरमा अस्पताल चलेन,बिरामी आएनन् त्यसैले बिदामा बस्नु कि त घण्टाको हिसाबमा हामी पे गर्छाै यसमा सहमत नभए काम छोड्नु भन्ने आदेश आउँछ निजी अस्पतालहरुबाट । सबैजना घर बसिरहेका छन् । लकडाउनको समयमा ड्युटी गर्न गयो व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्रीको आपूर्ति छैन । अस्पतालले मास्क,सेनेटाइजर,ग्लोभ्स,पीपीई एकदमै बचाएर अथवा कम चलाउनुहोस् भन्दै सुरक्षित रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भनिन्छ । स्रोत साधन नदिने अनि सुरक्षित रहनुहोस् भनेर मात्रै सुरक्षित भइन्छ र ?
कतिपय देशमा अस्पतलाहरुले जटिल अवस्थामा बाहेक आवश्यक पर्दैन भनी स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई नदिदा उनीहरुमा संक्रमण भएका समाचार धेरै पढिसक्यौ र सुनिसक्यौ । जोखिम मोल्दै बिरामीको उपचारमा २४ सै घण्टा खटिनपर्ने अवस्थामा अझैपनि नर्सको महत्वलाई बुझ्न नसकेको भान भइरहेको छ ।
अनि त्यति बेला मात्रै बुझ्छ होला ओहो ! मेरी आमा त्यही भएर मेरो प्रवाह नगरि बिरामीको सेवाका लागि जानुभएको रहेछ
त्यसैले त होला पहिले पहिले ब्लड प्रेसर जाँच गरिदेऊ न नानी भन्दै नजिक आउने घरबेटी बाले अहिले देख्नै नपरेनी हुन्थ्यो जस्तो गरिरहेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? कारण एउटै हो,नर्स सुरक्षित छैनन् यिनीहरुले भाइरस ल्याउछन् र हामीलाई पनि सार्छन् भन्ने भय ।
स्वास्थ्यकर्मीबाटै समुदायमा कोरोनाको संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरे अनुसार सुरक्षाका सामग्रीहरुको उपयोग,पीसीआर परीक्षण पश्चात मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समावेश हुने र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाको नजिकै बैकल्पिक व्यवस्थापन गरि एकान्तबासमा बस्न हुुने सुरक्षित वातावरण तयार गर्न सरकारले तुरुन्तै उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यो अवोध बालकलाई के थाहा उसकी आमा एक स्वास्थ्यकर्मी हो र जोखिम के हो ?
त्यसैले अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा दिने नर्स लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अहिले सलाम होइन पीपीई,आवश्यक परेको खण्डमा पीसीआर र उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ भनी सम्बन्धित निकायहरुलाई यो विषयलाई गम्भिरताका साथ समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछु ।
भनिन्छ नयाँ बिहानीसंगै नयाँ आशा पलाँउछ तर एक नर्स भएकै कारण आज मलाई नयाँ बिहानीसंगै आशा होइन निराशा पलाउँछ । एक ३ वर्षे नाबालकले हस्पिटलबाट आउँदा चकलेट ल्यादिनु है ममी भन्दै घरको झ्यालबाट चिच्याँउदा मन चसक्क हुन्छ अनि सम्झन्छु के थाहा फर्कदा चकलेटसंगै भाइरस पो ल्याउछु की ?
त्यो अवोध बालकलाई के थाहा उसकी आमा एक स्वास्थ्यकर्मी हो र जोखिम के हो ? मेरो छोरा स्कुल गएपछि भविष्यमा उनीहरुलाई पढ्ने बेलामा भन्ने गरिन्छ कि जस्तो सुकै विषम परिस्थितमा पनि आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्न हुँदैन । अनि त्यति बेला मात्रै बुझ्छ होला ओहो ! मेरी आमा त्यही भएर मेरो प्रवाह नगरि बिरामीको सेवाका लागि जानुभएको रहेछ ।
(लेखक शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत हुनुहुन्छ) ।
भारतको छिमेकी देशहरूसँग को सम्बन्ध हालसालै तनावपूर्ण रहेको छ। पाकिस्तान संगको नियन्त्रण रेखामा भारतले पाकिस्तानसँग गोलीबारी गरेको अवस्था छ। गल्वान उपत्यकामा चीनसँगको टकराव भएको घटना पनि हालसालै देखियो। भारत को नेपाल संग को सीमा विवाद पनि यथावत् नै छ । बंगलादेशसँग फरक्का ब्यारेज निर्माणको विषयलाई लिएर दुई मुलुकको बीचमा विवाद उत्पन्न भएको छ । अहिले […]